जब श्रीमानले अर्कैलाई अंगालो हालेको फोटो बा’हिरियो…(भिडियो सहित)
Homeसमाचारजब श्रीमानले अर्कैलाई अंगालो हालेको फोटो बा’हिरियो…(भिडियो सहित)
March 25, 2021 admin समाचार 5376
स्यांजाकी गीता तिवा’रीको विवाह २०७१ सालमा धुमधामसंग भएको थियो । उनका श्रीमान वाजा वजाएरै उनलाई बेहु’ली बनाउन आएका थिए । विवाह गरेर दिपकराज तिवारीले गीतालाई ल्याए’का थिए । विवाह गरे पछि उनी विदेश गए’का थिए । विदेशमा पनि उनको श्रीमानको ब्य’वहार राम्रो थिएन । अरुसंगै बस्ने गर्न थालेको उनले थाहा पाएकी थिइन् ।
तर एक वर्ष पछि उनी वि’देश छोडेर घर आए । उनी घर आएपछि छोरा दिप्स’न तिवारी जन्मिए । छोरा अहिले ५ वर्षको हुँदैछन् । घरमा आएपछि पनि छोराको बुवा भएर पनि उनको ब्य’वहार सुध्रिएन । गाउँका युवतीलाई वहि’नी समेत भन्थेनन् । त्यस्तो थाहा पाएर पनि उनले श्रीमानको इज्ज’त भनेको आफ्नो नै हो भनेर चुप लागेर बसिन् ।
केही भन्न सकिनन् । जुन युवतीसंग आफ्नो श्रीमान न’जिक भएका थिए । ति युवती पुर्व’की थिइन् । उनले आफु दिपकको श्रीमती भएको र आफु’हरुको एक सन्तान पनि भएकाले दिपकको पछि नलाग्नु भनेर फोनमा सम्झा’एको बताइन् ।
उनी फेरी भारत गए । कमाउनका लागि भारत गएका उनका श्रीमान सरु तिवारी भन्ने नाम गरेकी युवतीसंग नजि’कीएको थाहा पाए । उनले यो सरु तिवारी भन्ने को हो ? भनेर प्रश्न गर्दा मेरो बहिनी हो भनेर ज’वाफ दिए । तर उनलाई त्यो वि’श्वास लागेन । उनले अब म घर आउँछु भनेका थिए तर घर आउँछु भनेको १५ दिन अघि नै उनले श्रीमती गीतालाई फेस’वुकमा ब्लक गरेका छन् ।
अहिले आफ्ना श्रीमान विवा’हित महिला लिएर बैंग्लोरमा गएर बसेको आफुले थाहा पाएको बता’एकी छन् । महिलाका पनि तीन सन्तान रहेको र उनीहरु सबैलाई लिएर श्रीमान हिडेको आफुले थाहा पाएको बता’इन् । घरमा वृद्ध सासु र माइतमा पनि बृद्ध आमाबुवा भएको उनको भनाई छ । दुई दाजुको ए’क्लै बहिनी आफु भएकाले कहिल्यै माइ’तमा पनि दुख नगरेको उनको भनाई छ । – इ ताजा खबर बाट
अर्थमन्त्री भन्छन्: तत्काल लकडाउन त हुँदैन तर यस्ता कडा नियम भने लागू हुन्छन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
यसकरण विवाह नगरेका रहेछन नायक पल शाहले, खोले र’हस्य (भिडियो सहित)
February 24, 2021 admin समाचार 5671
पल शाहको पहि’लो भिडीयो तिम्रो यादमा रहन्छु अचेल हो जसले उनलाई पनि चर्चि’त बनायो । उनले चलचित्र क्षेत्रमा नाई नभन्नु ल ४ बाट डेब्यु गरेका हुन । उनी यस क्षेत्रमा २०१२ देखी हाल’सम्म सकृय छन्
February 2, 2021 admin समाचार 6933
सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार भइरहेको छ ?
January 12, 2021 admin समाचार 7185
नेपाली ब’जारमा आज पनि पहेँलो धातु सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ८०० रूपैयाँले घटे’कोमा आज ६०० रूपैयाँले बढेको हो । सोमबार प्रति’तोला ९२ हजार २०० रूपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज ९२ हजार ८०० रूपैयाँ
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229288)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227614)